U-Evgeni Plushenko akasayi ku-Olimpiki-2018
Iqhawe le-Olympic lexesha elibini kwi-skating e-Evgeni Plushenko ayiyi kumela iRashiya kuma-Olimpiki e-2018 aseYurophu ePyeongchang. Igosa elisemthethweni leKomiti yeOlimpiki yaseRashiya yashicilele uluhlu lwabadlali be-690 abaza kuthatha inxaxheba kwimincintiswano, kodwa amagama abanikezeli be-skater aphakathi kwabo.
U-Eugene wachaza umnqweno wakhe wokuthetha kuma-Olympic ka-2018 kungekudala emva kwemidlalo yasebusika eSochi. Emva koko u-Plushenko wathi:
Yonke into eyaphukileyo, yaphiliswa, ayikho into eyahlukileyo. Masizame ukwenza ngomhla wesihlanu we-Olympiad - kwaye senze kakuhle.
Nangona kunjalo, akukho namnye kula mazwi athatyathwa ngokungathí sina kwimvelaphi yehlazo elikhulu elibandakanya i-skater, eyenzeka kwi-Olympic Sochi ngo-2014.
Ukwenqaba ukusebenza kwiSochi-2014 kubiza uEvgenie Plushenko wezemidlalo
Abo bahamba ngokulandelelanisa zonke iindaba ezivela kuSochi ebusika ngo-2014 khumbula kakuhle ukuba uEvgeny wenqaba njani ukuphuma kwiqhwa kwinkqubo emfutshane ephoqelekileyo, echaza oku ngeentlungu ezibuhlungu emva kokusebenza kwangoku.
Ngenxa yokususwa kuka-Plushenko kwintcintiswano, iqela laseRussia lalahlekelwa imirhumo yeOlimpi okokuqala kwiminyaka emininzi kwimincintiswano yamadoda angatshatanga. Yaye intlungu emqolo emva kukaPhenhenko nangaphambi kokuqala kweMidlalo yeOlimpiki. Umkhangeli wambi wamenywa ukuba alahle indawo yakhe kwiqela eliya ku-Evgeny Kovtun, owayeneziphumo ezigqwesileyo wadlula zonke iimpumelelo ezifanelekileyo. Nangona kunjalo, u-Plushenko waqinisekisa umqeqeshi ukuba uya kuhlangabezana nalo msebenzi. Kodwa, ngokucacileyo, ndayifumanisa ubuchule bam.
Ukutshatyalaliswa kwamatye kunye nabalingane abaninzi bezemidlalo ke kwakungekho umda. Bathi bathatha le nyathelo ukusuka kumgca we-skater ngaphandle kwenye indlela yokungcatsha kunye "ukusekwa". Ngaphezulu nangentlungu ecaleni loluntu yinto yokuba kungekudala emva kwesiganeko eSochi, uEvgeni Plushenko wamemezela "ukuhambelana nokuhamba kweenyanga ezimbini."
Ngaba u-Eugene Plushenko uzawa kuma-Olimpiki ka-2018? Yonke into ingaba ...
Ngaphezulu kweminyaka emibili edlulileyo, uEvgeni Plushenko uye wathi ngokuphindaphindiweyo ukuba amaphupha okuthatha inxaxheba kwiiOlimpiki ezintsha. Ngendlebe nodliwano-ndlebe neentatheli, umdlali wezemidlalo wathi:
Ndingathanda ukwenza ngomhla wesihlanu we-Olympiad, ngaphambi kokuba ndibe namnye. Ndingathanda ukuzibekela irekhodi
Kungekudala, u-Plushenko uye wagqitha ilizwe ngokubonakalisa i-ice, kwaye ekupheleni kukaDisemba uya kukukholisa amaMuscovites kunye nomboniso wakhe we-ice "I-Nutcracker".
U-Yana Rudkovskaya, umfazi ka-Plushenko kunye nomvelisi onetalente, akaphosoli ithuba elincinci lokuphinda aqaphele ukuma komzimba wakhe womyeni.
Kuyafaneleka ukuba uqwalasele ukuba uluhlu lwabadlali beRussia abaya ku-Olimpiki ze-2018 lungatshintshwa, ngoko u-Yana Rudkovskaya uhlaba umlomo ithuba lokuthumela umlingane wakhe othandekayo ePyeongchang ... 😉
I-real estate kaZhanna Friske yahlulwa phakathi kweendlalifa
Iifoto ze-Prokhor Chaliapin ze-Instagram ezishaya umhlalaphantsi, ogama lakhe lifihlile
U-Ksenia Sobchak "waqhuba" ku-Olga Buzova kwi-Instagram yakhe
UAlexei Gorbunov, apho esuswa khona ngoku
UVitaliy Ivanovich Churkin washona eNew York
I-Eurovision 2017: ukusabela okunganeleyo kwe-Ukraine kwiYulia Samoilova
Imidlalo yokuphuhlisa intetho yabantwana 2 iminyaka
I-pizza kunye nenkukhu ephambileyo kunye neha
Ukuchonga ukuxhomekeka komsebenzi othile
Ukudweba kwabantwana ngo-Matshi 8 kumama nogogo-kumncintiswano esikolweni kunye nasebantwaneni-isigaba-nge-esiteji esibonisa ipencil, iipende - Ukudweba kuhle ngo-Matshi 8 ngezandla zam inyathelo ngesinyathelo
I-pie kunye nama-strawberries kunye ne-cream
I-sauce emhlophe emhlophe
I-Pokémon ibuyele: umdlalo obamba umhlaba kwiiveki ezimbini
Ukuhlambela okubangela umntwana
Indlela yokujonga ukutshabalalisa, isohlo elibi
Macaroni kwi microwaves
Abaqhiqho kunye ne-tshokolethi kunye neentonga
Uya kuphi na ukuphumla nomntwana?
Amadoda aziphatha njani emva kokuzalwa komfazi wabo?